ဆန်အပေါ်အစာရှောင်ခြင်းတစ်နေ့ - အထိရောက်ဆုံး options များ
လူတွေတောင်မှအပိုအလေးချိန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘယ်သူစာအာဟာရပညာရှင်တွေအပတ်စဉ်စီစဉ်ဖို့အကြံပေး detox အစားအစာ အဆိပ်၏ကိုယ်ကိုကင်းစင်ကူညီ။ အကောင်းဆုံးရလဒ်ဆန်အပေါ်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနေ့ရက်ကိုပေးသည်, ထိုကဲ့သို့သောအသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်အဖြစ်အစားအစာအမျိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်။
အစာရှောင်ခြင်းနေ့ရက်ခိုင်မာတဲ့စားရန်အလိုဆန္ဒနှင့်အပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိဘဲ, 1 ကီလိုဂရမ်မှတစ်နေ့လျှင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းဆန်အပေါ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအရာ - နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အစားအစာဝါးနှေးကွေးစွာစားရန်။ ဆန်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ enterosorbent သည် slag ဒါပေမယ့်လည်းပိုလျှံအရည်မသာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အညိုရောင်သို့မဟုတ်ရိုင်းဆန်: အများဆုံးသန့်ရှင်းရေးလုယူသောအစားအစာသင့်လျော် croup သည်။ နောက်ဆုံးအပေါင်းဆန်ဖြူများအတွက်ချက်ပြုတ်, ဒါပေမယ့်မခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ထုတ်ကုန်စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားပါလျှင်ဆားမပါဘဲဆန်အပေါ်တစ်နေ့အစာရှောင်, ကောင်းတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးတော်မူ၏။ သုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးရှေးခယျြမှုရှိပါသည်:
လေးရက်နေ့တိုင်းက refresh မှရေအေးလောင်းအစားအသောက်များတွင်ခွက်သီးနှံမီ။ ဘယ်လိုနှစ်ခုမှတဦးတည်း၏အသောအဘို့ကိုသုတ်ခြင်းနှင့်ငါသွန်းလောင်းရန် grit ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီ။ ပျော့ပဲသည်အထိကွတ်, ထို့နောက်အကြောင်းကိုနာရီဝက် protomai ။
ဆယ်မိနစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်း, ဆန်နှင့်ကြွက်ကြွက်ဆူသောရေ, နှစ်ခုမှတဦးတည်းကိုယူပါ။ ထိုအခါရေကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ပြီးသားပြုမိသည်အထိချက်ပြုတ်။
မည်သည့်အစားအစာနှင့်အတူ, နေ့အစာရှောင်တတ်သောဆန်မဟုတ်ရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အစားအသောက်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူတင်းကျပ်လိုက်နာမှုလိုအပ်သည်။ ရိုးရှင်းသောလိုအပ်ချက်များကို:
ဆန်အနေဖြင့်တစ်ဦး laxative လက်ဖက်ရည်ချုပ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသောက်လော့။
သငျသညျနေ့စဉ်အစားအစာလုပ်ဆောင်သွားရန်စီစဉ်ပါကဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့ထိုရက်သတ္တပတ်၏သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်ကိုရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။
ဘယ်လိုဘုရင်မကြီး Marguerite ထံမှဆန်အပေါ်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနေ့ကသိပ္ပံရဲ့ဆရာဝန်များ၏ယခုမသာလူသိများ "ကြယ်" အကြံပြုချက်များလုပ်ဆောင်သွားရန်အများအပြားကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ သိကောင်းစရာများနှင့်စာရွက်, အဓိကအရာကအရမ်းရိုးရှင်း - တင်းကြပ်စွာသူတို့ကိုလိုက်နာ:
မျြးစိမျ့စိမျ့ရေနှင့်ဆန် 250 ဂရမ်ဖြည့်ရန်အညအစားအသောက်များတွင်၏နေ့မတိုင်မှီ။
နံနက်ယံ၌, ရေ Clear သည်အထိသုတ်ခြင်း။
ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေနှစ်ခွက် Add, 15 မိနစ်ချက်ပြုတ်။
6 အစိတ်အပိုင်းများသို့ Divide ။
နောက်မ 8:00 pm အချိန်ထက်ညစာစားပွဲ။
ဆန် malyshevoy ၏နေ့အစာရှောင်တတ်သော
ဆန်တဲ့အစားအစာအပေါ်ပေါ်မှပစ္စည်းများချဒီ groats ကောင်းပါတယ် - ပိုတက်စီယမ်နဲ့ဆိုဒီယမ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိုးအစား။ ဆိုဒီယမ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရည်, ပိုတက်စီယမ်, အရည် display ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပိုတက်စီယမ်ကတည်းကဆန်ငါးကြိမ်ထက်ပိုအကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်နေသည်။ Krupa အလွန်ကျေနပ်စရာဖြစ်တယ်, ဒါတစ်ခုခုစားရန်အဘယ်သူမျှမပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ သည်အခြားအတွေ့အကြုံရှိဆရာဝန်များကကမ်းလှမ်းချက်ပြုတ်နည်းများအလွန် malyshevoy များအတွက်ဆန်အပေါ်တစ်နေ့အစာရှောင် rezultativen:
8 အပိုင်းပိုင်းသို့ Divide ။
ရေ 250 ဂရမ်, တဖန်သင်္ဘောသဖန်းအတွက် - ဆန်တစ်ဆက်ဆံတစ်နာရီပြီးနောက်အောက်ပါနိုင်ရန်အတွက်သုံးပါရန်။
အလွန် rezultativen ဒီထုတ်ကုန်အဖြစ်, ဗီတာမင်နှင့်ဖိုင်ဘာအများကြီးအနီရောင်ဆန်အပေါ်တစ်နေ့အစာရှောင်။ ဒါဟာအစကင်ဆာ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေမယ့်ခိုင်မာတဲ့ဓါတ်တိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။ အူထဲမှာယောင်ပြီး, ဿုံငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကျေနပ်။ အနီရောင်ဆန်ပွတ်သောကွောငျ့, က, အခွံဖယ်ရှားပစ်ရမှတဆင့်သွားကြဖို့ကောင်းတစ်ဦးရေဆေးလိုအပ်ပေသည်။ အလွန်ရိုးရှင်းစွာချက်ပြုတ်:
ပွက်ပွက်ဆူနေသောအခါ, ရေမြှုပ်ကိုဖယ်ရှား, အပူလျှော့ချပေးပါတယ်။
30-40 မိနစ် Cook က, အပဲမျိုးစုံတင်ဒါများမှာအထိပါပဲ။
ဆားနည်းနည်းခွင့်ပြုခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး သံလွင်ဆီ၏ ။
အာဟာရလည်းအညိုရောင်ဟုခေါ်ဝေါ်သောအညိုရောင်ဆန်, အပေါ်အစာရှောင်ခြင်းနေ့၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်ရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည်။ ယခင်ဗားရှင်းအနေဖြင့်အနည်းငယ်သာကွဲပြားခြားနားသောအဘိတ်:
ချက်ပြုတ် grit2နာရီမှာရေ add ခြင်းမပြုမီ။
ဆန်ခွက်ကိုတစ်ဦးလျှင်ကောကျပဲသီးနှံနူးညံ့သောအထိပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ2ခွက်, အနာစိမ်းသည်။
6 နှစ်ပိုင်း Divide သောက် အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည် သို့မဟုတ် Non-ကာဗွန်နိတ်တွင်းထွက်။
ဆန်မျက်နှာသာသို့မဟုတ်ဆားမပါဘဲလုံးဝလုပ်ဖို့မတတ်နိုင်ပါဘူးအဘယ်သူသည်, ဆန်ပေါ်တွင်ပျော့ပြောင်းပြီးချပေးပါသည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာ - ပန်းသီးနှင့်အတူဆန်။ အကြောင်းအရာခွက်ကိုချက်ပြုတ်သီးနှံမျှမကပိုတစ်နေ့လျှင်သုံးယူနစ်ထက်သုံးပိုင်းအကြား-မုန့်ညက်သောက်ပန်းသီးဖျော်ရည်သို့ခွဲခြားသို့မဟုတ်လတ်ဆတ်တဲ့ပန်းသီးကိုစားသည်။ အရည် - ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ။ ပထမဦးဆုံးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ menu ကိုရှေးခယျြစရာကြဲ, အစာရှောင်ခြင်းနေ့ကကြိုးစားပြီးသောသူတို့အဘို့:
နံနက်ယံ၌ဆန်နှင့်အတူကျပ်နှစ်ခုမီးဖုတ်ထားသောပန်းသီးကိုစားကြလော့။ တပတ်ရစ် Semi-ချော grit သစ်ကြံပိုးဖြန်းနိုင်ပါသည်။
ဆန်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏သုပ် - တစ်နေ့တာအတွင်း။
ညဦးယံ၌၏သင့်လျော်သောအရောအနှော "ဆန်စင်မီးဖုတ်ထားသောပန်းသီး mashed ။ " သငျသညျဂျင်းတစ်ဦးဖြစ်တော့ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဆန်ရေပေါ်မှာအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်စာရှောင်၏အပြင်းထန်ဆုံးနေ့ကစဉ်းစားသည်။ တစ်ဦးဖိအား cooker ထဲမှာသီးနှံထမင်းချက်, ရေ - တစ်ခုသာဓာတ်သတ္တုသို့မဟုတ်သန့်, အစားအသောက်မတိုင်မီနဲ့ 30 အပြီး 15 မိနစ်မသောက်ရ - အကြာတွင်။ နေ့စဉ်အစားအသောက်ကဒီတူ:
နေ့လယ်စာမှာအဆန်2ဇွန်း add တစ်ဖန်အတွက်ကြက်သွန်နှင့်ကြက်သွန်ဖြူဟင်းရည်ချက်ပြုတ်။
ညဦးယံအချိန် - ဂျင်းနှင့်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူအနံ့ဆန်။
ပိုမိုလွယ်ကူ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏စားသုံးမှုနှင့်အတူပင်ဒီအစားအစာကိုပုံမှန်အစားအသောက်ကြိုက်တတ်တဲ့အများအပြားဆန်အစားအသောက်များတွင်ထမ်း။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူဆန်အပေါ်အစာရှောင်ခြင်းနေ့ကအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? menu က:
နံနက်စာ: ခရမ်းချဉ်သီး, ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အစိမ်းရောင်နှင့်အတူဖုတ်ဆန်။ မဲဆန္ဒနယ် -51, 15 မိနစ်မုန့်ဖုတ်။
သခွားသီး, ထောပတ်သီး, arugula နှင့်ဆန်တစ်သုပ် - တစ်နေ့တာအတွင်း။
ညစာအဘို့သည်နောက်တဖန်နှစ်ခုထက်ကိုအပိုင်းပိုင်းလှော်ငရုတ်ကောင်းချက်ပြုတ်။ ဆန်, မုန်လာဥနီနှင့်အစိမ်းရောင်ထဲက mincemeat လုပ်, သင်ကြက်သွန်ဖြူတစ်လေးညှင်းပွင့ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ 15 မိနစ်ဖုတ်ရမည်။
ဘယ်လိုသခွားသီးနှင့်အတူဆန်အပေါ်အစားအသောက်များတွင်ကောင်းပြီ, တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနေ့ကသက်သေပြ။ ရေနှင့် 5% - - ဤဟင်းသီးဟင်းရွက် 95% ကတည်းကစင်ကြယ်သောဖိုင်ဘာနည်းအရည်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး circuit ကိုအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်:
5-6 အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားဆန်တစ်ခွက်, ပြုတ်။
ဆန်အတွက်မြှင့်တင်ကြောင်းပရိုတိန်းနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ရှိပါတယ် အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို ;
တစ်ဦးကဆန်အစားအစာအပေါ်စားသောက်ပုံစံကိုပြောင်းလဲပြီး, သငျသညျကနျြးမာရေးထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ, အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်နိုင်ပါတယ်။
မည်သို့ပါးလွှာ Anfisa Chekhov?
ဂေါက်ရောဂါကိုများအတွက်အစားအသောက် - တစ်ကြမ်းတမ်း menu ကို
နယူး Dukan Diet
အသွေးသည်အုပ်စုသည် 1 အစားအသောက်
မည်သို့ပါးလွှာ Ariana Grande?
အစားအသောက် "5 ရက်ကြာ5ကီလိုဂရမ်"
တစ်လ 15 ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Christian Bale - အစားအသောက်များတွင်
ကီဗင် Spacey အတူတူပင်အထက်တန်းလွှာကြောင်း Harvey Weinstein ၏ဆေးခန်းမှာကုသမှုအဘို့အသွား၏
ခွေးအတွက် Demodectic ဝဲ
အိမ်မှာနောက်ပြီး -3နည်းပညာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လှပသောဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများ 20
ကက်သရင်းဇီတာ-Jones က "Papashina တပ်မတော် '၏ Premiere မှာမနာလိုသူမ၏နှာခေါင်းသုတ်
Coleitis - အမျိုးသမီးများရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသမှု, ရောဂါအမျိုးအစားအားလုံးကိုကုသအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးချစ်သူများ, နိုင်ငံခြားသားများ